चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर मूल्य १० % वृद्धि, प्रतिकित्ता रू.२३४४ पुग्यो
चैत २४, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार चन्दागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार ३४४ पुगेको हो ।
कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयर मूल्य बढेको हो । यो समाचार तयार पार्दाको अवधि १२ : ५५ बजेसम्ममा मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयर खरीद माग १३ हजार २३५ छ भने विक्रेता शून्य रहेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य कारोबारमा आएको एक महीनासम्म सर्किट लेबलमा वृद्धि हुँदै आएको थियो ।
कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार ७९ पुगेर रू. १ हजार ९३० सम्म झरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीको शेयर मूल्य पुन : बढ्न थालेको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य पहिलो कारोबार दिन प्रतिकित्ता रू. १६१मा खुला भएको भएको थियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) बाट कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि रू. ९६ दशमलव ६९ देखि २९० दशमलव शून्य ७ ओपन रेञ्ज पाएको थियो ।
महिला लघुवित्तको शेयर मूल्य १० % वृद्धि, प्रतिकित्ता रू. १६०६ पुग्यो[२०७८ बैशाख, ७]
मंगलवार पहिलो घण्टामा ०.८५ % ले बढ्यो नेप्से परिसूचक (१२ बजेको अपडेट)[२०७८ बैशाख, ७]